Liiska Hubinta emaylka: 13 Talaabo kahor intaadan gujin dir! | Martech Zone
Jimco, Oktoobar 7, 2011 Arbacada, Oktoobar 26, 2011 Douglas Karr
Waxaan daabaceynaa emayl badan usbuuc walba aqristayaasheena waxay ku qarxeen in kabadan 4,700 oo macaamiil ah! Waxaan doonayay inaan la wadaago talooyinkayaga iyo liiska hubinta ee aan soo marno toddobaad kasta ka hor inta aanan riixin badhanka dirista.
Ma tahay mawduucaaga mudan, ku habboon, la filayo, oo qiimo leh macaamiisha? Haddii aysan ahayn - markaa ha dirin!
Markaad dirto emaylka, caadi ahaan waxaa jira labo walxood oo qofka qaata uu arko… mida hore waa qofka ay emailku ka yimaadeen. Adigaa iska leh ka magac waafaqsan dirid kasta? Cinwaanka emailkaaga ma la aqoonsan karaa?
Qaybta labaad waa adiga khadka mawduuca. Ma dameer laad baa? Miyay tahay mawduuc mawduuc soo jiidanaysa oo ka dhigaya iyaga inay rabaan inay furaan emaylka si ay u akhriyaan waxyaabaha ku dhex jira? Haddii aysan ahayn, dadka ayaa si fudud u tirtiri doona waqtigan.
Haddii aad sawirro leedahay, ma adeegsaneysaa tags alt in la qoro qoraal kale oo akhristaha ku kaxayn doona inuu soo dejiyo sawirrada ama awood u yeesho inuu tallaabo qaado sawir la'aan?
Qaabkaaga ma u fududahay in laga akhriyo a qalab mobile? Ilaa 40% dhammaan e-mayllada ayaa hadda lagu akhriyaa aaladda moobaylka lambarkuna wuu sii kordhayaa sannad kasta. Haddii aad haysatid emayl ballaaran oo leh qoraal dheer oo soo socda, akhristaha ayaa ku jahwareeraya inuu horay iyo gadaal u socdo. Garaacista tirtirka ayaa aad ufudud.
Haddii aad email u dirayso qaab HTML ah, ma jiraa cinwaan fiican cinwaanka cinwaanka dadka waawayn ee guji iyo ka eeg emaylka biraawsarka?
Ma ka hubisay emaylka higgaad, naxwaha iyo inaad ka fogaato ereyada kaa siin kara inaad si sax ah ugu marto galka Emailka Junk?
Maxaad ka rabtaa akhristaha inuu sameeyo ka dib markay akhriyaan emaylka? Miyaad siisay wax weyn wicitaan-ku-dhaqaaq iyaga inay qaadaan tallaabadaas?
Ma jiraan macluumaad dheeri ah oo aad weydiisan kartid akhristaha taas oo kaa caawin doonta bartilmaameedka iyo qeybta waxyaabaha aad diraysid? Maxaad u waydiisan la’dahay hal xog oo emayl kasta?
Adiga ma tijaabi emaylka liistada ku jirta iyo iyada oo aan lahayn xog si loo arko sida xarigga shaqsiyadeed iyo waxyaabaha firfircoon u soo bandhigo? Dhammaan xiriiriyayaashu ma shaqeeyeen?
Isla markiiba ma sameysaa gaadho barta ama aad ku foorarsataa cutubyada suuq dhibsiga ka hadlaa? Dadku way mashquulsan yihiin - jooji waqtiga ay ku luminayaan!
Miyaad siineysaa dadka waawayn qaab ka bixida xiriirkaaga emaylka? Haddii kale - waxaad runtii u baahan tahay inaad raacdo oggolaansho weyn oo ku saleysan bixiyaha e-maylka.
Ma waxaad siineysaa dadka waawayn qaab wadaagista waxyaabaha ku jira ama iyada oo loo diro badhanka saaxiib ama badhamada wadaagista bulshada? Oo hadday wax wadaagaan - boggaaga degitaanku ma leeyahay ikhtiyaar ikhtiyaar ah?
Waxaan iska diiwaangeliyaa oo aan ka joojiyaa emails mar walba. Marwalba waxaan siiyaa shirkad faa'iidada shakiga markaan diiwaangaliyo laakiin sida ugu dhakhsaha badan ee aan arko aniga oo tirtiraya emayl aad iyo aad u badan iyaga maxaa yeelay wax qiimo ah malahan shirkadda. Haddii aad farriin u direyso qof - noqo mid edeb leh oo xushmeeya waqtigooda oo daabac email aad u weyn!